Posted by Tranquillus | Agoosto 8, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Si ka duwan dhammaan nidaamyada lagu dhigo hay'adaha bulshada sida CPAM ama the CAF. Shaqaalaha ilmo sugaya gebi ahaanba looma baahna inuu raaco mid ka mid ah habraacyada ogeysiintaan. Ma jiro wax sharci ah oo ku khasbaya inay u sheegaan loo-shaqeehooda bixitaanka fasaxa dhalmada sida ku xusan jadwal cayiman.
Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu talinayaa sababao la taaban karo oo ah in aan dib loo dhigin waqti dheer. Sababta oo ah ku dhawaaqida uurka waxay u horseedaysaa dhowr xuquuq iyo xuquuq. Ku dhawaaqista uurkaaga waxay ka caawineysaa inaad naftaada ka ilaaliso in shaqada laga eryi karo. In la haysto suurtagalnimada codsashada beddel mawqif. In la helo rukhsad maqnaansho si looga gudbo baaritaannada caafimaad. Ama ikhtiyaarka inaad iska casisho ogeysiis la'aan.
Muddo intee le'eg ayay umulisadu ka baxaysaa?
Qodobka L1225-17 ee Xeerka Shaqaalaha ayaa dhigaya in dhammaan haweenka uurka leh ee mushahar qaata la siiyo fasax hooyonimo oo u dhaw wakhtiga qiyaasta umusha. Muddadan nasashada waxay kuxirantahay tirada la qiyaasay ee carruurta la filayo iyo kuwa durba ku tiirsan.
Maqnaanshaha tallaabooyin caadi ah oo qanciya, muddada fasaxa umusha ee ilmaha ugu horreeya waxay bilaabmaysaa 6 toddobaad kahor taariikhda la filayo umulinta. Waxaa loogu yeeraa fasaxa dhalmada ka hor, wuxuu sii soconayaa 10 maalmood dhalmada kadib. Waxaa loogu yeeraa fasaxa umusha ka dib, tusaale ahaan wadarta guud ee 16 toddobaad. Marka laga hadlayo seddex mataano, wadarta muddada maqnaashaha waxay noqon doontaa 46 toddobaad.
Hadaad tahay hooyada hanka leh ee mataanaha ah. Waad dooran kartaa inaad ka tanaasusho qayb ka mid ah fasaxaaga umusha. Laakiin lama yareyn karo wax kayar 8 todobaad asbuucyada ugu horeeya dhalmada kadib wey kujiraan.
READ Sidee loo qoraa warbixinta khuseeya?
Maxaa dhacaya haddii cillad jiro muddada uurka?
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa fasaxa cudurada. Shaqaale xanuunsan uurkeeda awgood ama dhibaato kala kulanto dhalmada kadib. Ka faa'iideyso fasax caafimaad oo dheeri ah oo uu siiyay dhaqtarkiisa. Fasaxani wuxuu u dhigmi doonaa fasaxa hooyonimada iyo kiiskan, oo uu daboolay 100% loo shaqeeyaha. Qodobka L1225-21 ee Xeerka Shaqada sidoo kale wuxuu bixinayaa ugu badnaan 2 toddobaad kahor bilawga muddada uurka iyo 4 toddobaad kadib dhammaadka fasaxa umusha.
Sidee shaqada dib ugu laabashadu usocdaa?
Qodobka L1225-25 ee Xeerka Shaqaalaha ayaa qeexaya in marka fasaxa umusha ee shaqaaluhu dhammaado. Midda dambe waxay ku laaban doontaa shaqadeeda ama shaqo la mid ah tan ugu yar isla mushaharka. Intaas waxaa sii dheer, sida ku xusan qodobka L1225-24, waqtiga lagu qaatay fasaxa waxaa loo tiriyaa inuu u dhigmo muddada shaqada dhabta ah ee xisaabinta fasaxa mushaharka iyo waayeelka. Baadhitaan caafimaad ayaa wali la sameeyaa sideeda maalmood ee ugu horaysa marka shaqada lagu soo noqdo.
Sida ugu wanaagsan ee lagu ogeysiiyo fasaxa hooyonimada loo-shaqeeyahaaga?
Mid ka mid ah hababka lagula taliyo haweenka shaqeeya ayaa ah in la wargaliyo uurka ay leedahay iyada oo la cayimayo taarikhda fasaxa umusha. Waxaas oo dhami waxay ku qoran yihiin warqad diiwaangashan oo leh qirasho rasiid ama rasiid. Taas oo, waa muhiim inaadan ilaawin inaad ku dhejiso shahaadada caafimaadka ee uurka.
Maqaalka intiisa kale, waxaad ka heli doontaa warqad caddeyn uur leh. Moodhkan waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo taariikhda bixitaankaaga fasaxa. Iyo waliba warqad tusaale ah oo ku saabsan ogaysiiska fasaxaaga caafimaad ee loo diray loo-shaqeeyahaaga haddii ay jiraan dhibaatooyin. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan xuquuqdaada, la tasho wakiilka shaqaalaha ama amniga bulshada.
Tusaalaha lambarka 1: Boosto loogu dhawaaqo uurkeeda iyo taariikhda ay ku tagtay fasaxa umusha
Magaca shirkadda ku shaqeysa
Waaxda Kheyraadka Aadanaha
Ujeeddo: Fasaxa hooyonimada
Agaasimaha Kheyraadka aadanaha,
Farxad weyn ayey ii tahay inaan ku dhawaaqo imaatinka cunuggayga cusub.
Sida ku cad shahaadada caafimaad ee halkan ku lifaaqan, dhalashadeeda ayaa la filayaa ilaa [taariikhda]. Sidaas darteed waxaan jeclaan lahaa in aan ka maqnaado [taariikhda] iyo ilaa iyo ka mid ahaanshaha [taariikhda] fasaxa umusha sida ku cad qodobka L1225-17 ee Xeerka Shaqaalaha.
Waad ku mahadsan tahay tixgalinta tan oo aad ku sii wadatagtay wixii macluumaad dheeri ah.
Inta laga sugayo xaqiijinta heshiiskaaga maalmahan, fadlan aqbal, Mudane Agaasime, salaankeyga ugu wanaagsan.
Tusaalaha nambarka 2: Boosto ugu dir si aad ugu sheegto loo-shaqeeyahaaga taariikhda fasaxaaga cudurada.
Ujeeddo: Fasax nafsiyan ah
Waxaan kugu wargaliyay warqad hore, xaaladdeyda uurka. Nasiib darro xaaladdayda caafimaad ayaa sii xumaatay dhawaan dhakhtarkayguna wuxuu ii qoray 15 maalmood oo fasax ah oo aan ku maqnayn (Qodobka L1225-21 ee Xeerka Shaqada).
Sidaa darteed, aniga oo ku daraya fasaxa jirkayga iyo fasaxa umusha. Waxaan ka maqnaan doonaa (taarikhda) illaa (taarikhda) oo aan ka bilaabmin (taariikhda) illaa (taariikhda), sidii hore loo qorsheeyay
Waxaan kuu soo dirayaa shahaadada caafimaadka ee sharaxaysa xaaladayda iyo sidoo kale shaqadeyda shaqo joojinta.
Adigoo ku xisaabtamaya fahamkaaga, waxaan kaa codsanayaa inaad aqbasho, Mudane Agaasime, salaankeyga ugu wanaagsan.
Soo deji "Mail si ay ugu dhawaaqdo uurkeeda iyo taariikhda ay ku baxayso fasaxa umusha"	warqad-ku- dhawaaqista-uurkeeda-iyo-taariikhda-ay-ka-tegeyso-fasaxa- umusha-1.docx – La soo dejiyay 436 jeer – 13 KB
Soo deji "Warqad aad ku ogeysiinayso cidda aad u shaqayso taariikhaha fasaxaaga cudur-sidaha 2"	warqad-si-aad-ogaysiiso-loo-shaqeeyaha-taariikhaha-fasaxa-pathological-kaaga-2.docx - La soo dejiyay 393 jeer - 13 KB
Ku wargeli bixiyahaaga fasaxa umusha ee loo shaqeeyahaaga Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeTababbarka Xirfadeed ee Xirfad La'aanta
socdaDib ula wareego ogeysiis la'aan, xuquuqda haweenka uurka leh